ပြည်တွင်းကားများ၏စျေးနှုန်းကိုဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်! | RayHaber | raillynews
ပင်မစာမျက်နှာတူရကီMarmara ဒေသကြီး16 Bursaပြည်တွင်းကားများ၏စျေးနှုန်းကိုဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်!
28 / 01 / 2020 16 Bursa, အထွေထွေ, လမ်းမကြီး, ခေါင်းစီးသတင်း, Marmara ဒေသကြီး, မော်တော်ယာဉ်, တူရကီ
တူရကီရဲ့မော်တော်ယာဉ်လုပ်ငန်းအဖွဲ့ (TOGG) CEO ဖြစ်သူ GurcanTurkoglu ဘုရင်ပြည်တွင်းမော်တော်ကားနှင့်ပတ်သက်သည့်ဝေစုသတင်းအချက်အလက်သစ်များ။ Karakaşက“ ကျနော်တို့ Bosch ကိုမော်တော်ယာဉ်ရဲ့လျှပ်စစ်မော်တာအတွက်ပြောနေတာပါ။ ယာဉ်ဘက်ထရီအတွက်တရုတ်ကုမ္ပဏီ ၆ ခုနဲ့လျှို့ဝှက်စာချုပ်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တယ်။
တူရကီရဲ့မော်တော်ယာဉ်လုပ်ငန်းအဖွဲ့ (TOGG) CEO ဖြစ်သူ GurcanTurkoglu Karakas, ပြည်တွင်းမော်တော်ကားအကြောင်းကိုသစ်ကိုအသေးစိတျကဆိုသည်။
Hürriyetမှ Burak Coşan၏သတင်းအရGürcanKarakaşက“ အမှတ်တံဆိပ်ကနေဒီဇိုင်းအထိကမ္ဘာပေါ်မှာအကောင်းဆုံးအရာတွေနဲ့အတူကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်။ မွေးဖွားခြင်းမှလျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်နိုင်သောကုမ္ပဏီများမများပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤနည်းပညာကိုရရှိထားသည့်မိတ်ဖက်များနှင့်အတူတကွအလုပ်လုပ်ပြီးဤလုပ်ငန်းစဉ်တွင်အတူတကွအလုပ်လုပ်ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်မော်တော်ယာဉ်၏လျှပ်စစ်မော်တာအတွက် Bosch နှင့်စကားပြောနေသည်။ ယာဉ်ဘက်ထရီအတွက်တရုတ်ကုမ္ပဏီ ၆ ခုနှင့်လျှို့ဝှက်စာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ကသူတို့ထဲကတစ်ခုနှင့်အတူကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းပါလိမ့်မယ်။ ဂျာမန်အင်ဂျင်နီယာကုမ္ပဏီ EDAG ကိုမော်တော်ယာဉ်ပေါင်းစည်းမှုအတွက်နည်းပညာမိတ်ဖက်အဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ Myra သည်အထူးသဖြင့်ဗြိတိန်နိုင်ငံမှလက်ခံခဲ့သောစက်မှုညနေခင်းများတွင်ကိုယ်ထည်စနစ်များအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ် ဦး ဖြစ်သည်။ ဒီဇိုင်းအတွက်အီတလီလူမျိုးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့သဘောတူခဲ့တယ်။ ”
ကာရာကက်ရှ်ကဆက်ပြောသည် -“ ကမ္ဘာပေါ်မှာဘယ်သူကအကောင်းဆုံးလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ကြည့်နေတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်supplierပြီနှင့်မေလကဲ့သို့ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူများရွေးချယ်ခြင်းပြီးဆုံးမည်ဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့တူရကီကနေကြည့်နေကြသည်ဘယ်သူကိုနှငျ့ကြှနျုပျတို့၏တိုင်းပြည်သည်ဤနည်းပညာကိုဆောင်ကြဉ်းပေးနိုင်သည်။ ကျနော်တို့အလွန်လေးနက်ကုန်ကျစရိတ်သုတေသနပြုပါပြီ။ သငျသညျတူရကီအတွက်ထုတ်လုပ်နိုင်ကြောင်း, ပိုမိုကုန်ကျ-ထိရောက်သောကြောင့်သူ့ကိုကွညျ့ရှုဖို့တခြားနေရာထုတ်ပေးသည်။ ငါတို့ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ရှေ့မှာထိုင်တဲ့အခါဘာဆိုတာဘာလဲဆိုတာငါတို့သိတယ်။ ”
ထုတ်လုပ်မည့်ကားများနှင့် ပတ်သက်၍ စျေးနှုန်းသတင်းအချက်အလက်များကိုမျှဝေခြင်းမရှိသောGürcanKarakaşကဤအကြောင်းပြချက်ကိုရှင်းပြခဲ့သည်။
“ ပြိုင်ဘက်တွေအနေနဲ့ဒီအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ကိုမပေးချင်လို့ပါ။ သို့သော် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင် C-SUV အစိတ်အပိုင်းတွင်ရောင်းချသောဒီဇယ်နှင့်ဓာတ်ဆီသုံးကားများ၏စျေးနှုန်းမှာ ၂၅၀ မှ ၃၀၀၀၀၀ ကြားတွင်ရှိသည်။ ပြည်တွင်းကားကိုဖြန့်ချိမည့်နှစ်တွင်၎င်းကားများ၏စျေးနှုန်းနှင့်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ”
GürcanKarakaşကပြောကြားသည်မှာ TOGG စက်ရုံဆောက်လုပ်ရေးအတွက်မြေတိုင်းစစ်တမ်းများစတင်ခဲ့ပြီးစက်ရုံ၏အုတ်မြစ်ကိုမေလတွင်စတင်မည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
Karakaşက“ ၂၀၂၂ ခုနှစ်မှာငါတို့ပထမဆုံးထုတ်လုပ်မှုမတိုင်ခင်ကကားတွေကိုတိပ်ခွေတွေကနေလျှော့ချလိမ့်မယ်။ ပျမ်းမျှနှစ်စဉ်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည် ၁၇၅,၀၀၀ စီးနိုင်သည့်စက်ရုံသည် ၁၅ နှစ်အတွင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၂၂ ဘီလီယံနှင့်အတူ ၂၀၂၂ ခုနှစ်တွင်ယာဉ်အစီးပေါင်း ၁ သန်းကိုဖြိုချရန်ရည်ရွယ်သည်။
၂၀၂၄ ခုနှစ်တွင်ပထမဆုံးတင်ပို့မှုကိုသင်္ကေတဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်ဟုကာရာကတ်ကပြောကြားခဲ့သည်။ “ အခုချိန်မှာပို့ကုန်စွမ်းရည်ရဲ့ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းကိုကျနော်တို့ခွဲဝေချထားပါတယ်။ သို့သော်ဤဝယ်လိုအားနှင့်အညီပို။ ပင်တိုးမြှင့်စေနိုင်သည်။ ကျနော်တို့ကဒီအပြောင်းအလဲနှင့်အတူတက်စောင့်ရှောက်နိုင်ပါတယ်။ "
စျေး Alanya ကေဘယ်လ်ကားမပါဘဲပေးထားခဲ့သည်
စျေး Alanya အတွက်ကေဘယ်လ်ကားမပါဘဲပေးထားခဲ့သည်
cable ကိုကားတစ်စီးခဲ့ 18 နှုန်းကိုထပ် Alanya စျေး
အဆိုပါကားကိုလမ်းရိုးစွန်းဒေသများမှ Metrobus အားဖြင့်ဖြုတ်ချခံခဲ့ရကူး